Maareynta UNWTO si loo xaqiijiyo dib u doorashada Xoghayaha Guud Zurab Pololikashvili ayaa sii socota
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » News » Maareynta UNWTO si loo xaqiijiyo dib u doorashada Xoghayaha Guud Zurab Pololikashvili ayaa sii socota
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Georgia War Cusub • Wararka Dowladda • News • Dadka • Wararka Spain • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Xoghayaha Guud ee UNWTO Zurab Pololikashvili
UNWTO musuqmaasuq leh ayaa leh xeelado dheeri ah oo loo diyaariyey si loogu waaniyo wasiirada dalxiiska ee matalaya Golaha Fulinta ee Hay'adda Gaarka ah ee UN.
Markuu furmayo kal-fadhigii Golaha Fulinta ee UNWTO ee Georgia, khiyaamo cusub ayaa la ogaaday oo ku saabsan sida Xoghayaha UNWTO, Zurab Pololikashvili iyo kooxdiisu ay isugu dayaan inay fara-maroojiyaan habsami u socodka doorashada si loo yareeyo waqtiga iyo fursadaha ay u leeyihiin murashaxiinta kale inay isdiiwaan geliyaan oo ololeeyaan.
Toddobaadkii hore eTurboNews laga warbixiyay isku day la sameeyay waxaa qoray Pololikashvili si ay ulayaabaan Xubnaha Golaha Fulinta si kadis ah markay soo jeediyeen isbadalada daqiiqada ugu dambeysa ee dukumiintiyada Golaha si loogeeyo taariikhda doorashada laga bilaabo May 2021 ilaa January 2021.
Haddii loo oggolaado waqtiga kama-dambaysta ah ee musharrixiinta Xoghayaha Guud ee UNWTO waxay horey u ahaan lahayd 2 bilood, Nofeembar 2020.
Qodobada ay daabaceen eTurboNews waxay kicisay falcelin badan xubnaha UNWTO iyo kuwa gudaha ah, iyagoo muujinaya ceeb iyo walaac ku saabsan ficilada Pololikashvili. Waxay ku dhiirrigelisay xubnaha qaarkood iyo kuwa gudahaba inay si faahfaahsan u hubiyaan dukumiintiyada golaha fulinta ayna dib ugu noqdaan khaladaad dheeri ah eTurboNews.
Sawir cusub oo naxdin leh ayaa lagu muujiyay dukumiinti ku saabsan
Nidaamyada Gaarka ah ee Maamulaya Kalfadhiga Golaha inta lagu gudajiray Faafida COVID-19 (dhagsii si aad ula soo baxdo PDF)
Dukumintigan, nidaam cusub ayaa lagu soo bandhigay taas “Soo jeedinta iyo wax ka beddelka go’aamada la xiriira ajandaha waa in qoraal ahaan loogu gudbiyaa Xoghayaha Guud ugu yaraan 72 saacadood ka hor dooda qodobka u dhigma si uu ula wadaago dhammaan Xubnaha Golaha ugu dambeyn 48 saac ka hor” .
Tan waxaa si cad loogu tixgelin karaa inay tahay isku day kale oo lagu qasbayo Xubnaha Golaha inay aqbalaan dhammaan isbadalada la soo jeediyay ee ku saabsan magacaabista musharixiinta cusub ee Xoghayaha Guud.
Beddelidda tan hadda waxay noqon kartaa hawl aan macquul ahayn iyadoo la tixgelinayo in adduunku ku sii kordhayo dhibaatada COVID-19 qof walbana wuxuu u baahan yahay wax ka badan waqti ka yar inuu ku shaqeeyo.
Polikashvili wuu ogyahay tan. Wuu garwaaqsaday wuuna fahmay si sax ah wuxuu samaynayo. Georgia waxay ka tirsanaan jirtay Midowgii Soofiyeeti ee hore. Polikashvili wuxuu qeyb ka ahaa dowladdii musuqmaasuq ee horey uga dhacday Georgia.
In 2017 eTurboNews daabacay maqaal ku saabsan “Sidee ayuu wariye reer Georgia u arkaa magacaabista UNWTO Zurab Pololikashvili Xoghayaha Guud?
Polikashvili wuxuu adeegsanayaa dhammaan khiyaamooyinka suurtagalka ah si uu u fara maroojiyo geeddi-socodka doorashada asaga oo u daneynaya.
Waxay u badan tahay in kaqeybgalayaasha badankood ee kaqeybgalaya kulanka Golaha ee Georgia ay u safrayaan halkaas maanta, Isniinta, Sebtember 14.
Wasiirada noocan oo kale ah waxaa laga yaabaa inaysan ku sugneyn shaqada iyo hubinta dukumiintiyada. Waxay u badan tahay inaysan xitaa dareemin isbeddelada noocaas ah ee daqiiqaddii ugu dambeysay, sida isbeddelka la soo jeediyay ee taariikhda doorashada.
Kuwo badan waxay u badan tahay inay bartay hanaan usbuuc ama laba sano ka hor, markii dukumiinti duug ah oo leh waqtiyadii hore iyo taariikhda ay weli siiyeen UNWTO.
Marka sidee looga filayaa xubnaha inay soo jeedin iyo wax ka beddel ku sameeyaan go'aannada Golaha 72 saacadood ka hor, haddii aysan ka warqabin isbeddelada daqiiqadda ugu dambeysa oo aysan sii heysan 72 saacadood?
Adoo samaynaya isbeddelada noocan oo kale ah waxay leeyihiin hal ujeedo oo keliya. Hubinta dib u doorashada xoghayaha guud ee hadda jira.
Polikashvili wuxuu iskudayaa inuu si kadis ah ulaqabsado Xubnaha UNWTO wuxuuna damacsanyahay inuu siiyo wax fursad ah oo ay kaga wada hadlaan mowduucyada muhiimka ah kulanka soo socda ee Georgia.
Waxay u badan tahay inay adag tahay in mid ka mid ah xubnaha UNWTO iyo dadka u dhuun daloola ay ka warqabaan in nidaamka noocan ah waligiis loo dhigay shirarka kale ee Golaha Fulinta. Waxaas oo dhan sida muuqata waxay ka mid yihiin khiyaanooyinka uu ka fikiray Polikashvili
Xaqiiqda kale ee laga xishoodo ayaa ah in afarta maalmood ee Xubnaha Golaha Fulintu joogi doonaan Georgia, in aan ka badnayn 4 saacadood iyo 15 daqiiqo ayaa loo qoondeeyay shirarka Golaha Fulinta ee dhabta ah.
Barnaamijka intiisa kale wuxuu umuuqdaa mid loola jeedo ololaha doorashada ee Pololikashvili´s oo leh soo dhaweyn furitaan ah, xaflad muusig, qado isku xirka bulshada, casho sharaf, iyo dalxiis ku taga goobaha dalxiiska ee Georgia.
Xubnaha iyo dadka u dhuun daloola waxay la yaaban yihiin sida ugu dhexjirta masiibo caalami ah oo ba'an, UNWTO waxay qiil u sameyn kartaa in la sameeyo dhamaan dadaalada, kharashyada, iyo halista si loo qaado kalfadhiga Golaha Georgia, marka afar saacadood oo kaliya la heli karo kulanka golaha dhabta ah iyadoo laga wada hadlayo go'aamada sida muuqata horay loo sii kariyey.
Jawaabtu way fududahay. Xoghayaha Guud sida martida loo yahay waxay dooneysaa musharixiinta dhankiisa wanaagsan.
Mawduucyada kulanka GeorgiaS:
a) Isbedelada socda iyo rajada dalxiiska caalamiga,
b) Hirgelinta Barnaamijka Guud ee Shaqada,
c) Abuuritaanka xafiiska UNWTO ee Bariga Dhexe ee Sacuudi Carabiya,
d) Warbixin ku saabsan xaaladda dhaqaale ee Ururka,
e) Warbixinta shaqaalaha,
f) Dib u habeynta Ururka.
Waqtiga gaaban iyo nidaamka cusub ee loo dejiyay ee ku saabsan waajibaadka soo gudbinta soo jeedinta iyo wax ka beddelka ajandaha iyo go'aamada 72 saacadood ka hor, ma jiri doono wax baaxad leh oo looga wada hadlayo kulanka, afarta saacadoodna waxay umuuqdaan kaliya in loola jeedo sii saraakiisha UNWTO isbedelka si ay u soo bandhigaan warbixintooda iyo soo jeedintooda, kuwaas oo horeyba loo ansixiyay de-facto haddii aan wax faallo qoraal ah la soo gudbin 72 saac ka hor.
Iyada oo xubnaha Golaha lagu xanaaneynayo Georgia dhammaan mudnaanta iyo soo dhoweynta heer sare ah ee loo fidiyay, waxaa isweydiin mudan haddii xubin kasta uu dareemo raaxo oo la siiyo fursad uu faallo muhiim ah kaga bixiyo maamul xumada iyo wax is daba marinta ka socota UNWTO.
Si kastaba ha noqotee, Xubno dhowr ah oo UNWTO ah iyo kuwa gudaha ah ayaa ka faallooda in tani laga yaabo in aan la ogaan.
Xaaladda hadda jirta ee COVID-19, waxaa lagu rajo weynaan karaa inay weli jirto dareen mas'uuliyadeed oo ay qabaan qaar ka mid ah golaha fulinta.
Khayaanada noocan oo kale ah waxaa laga yaabaa inaysan haba yaraatee tagin iyadoo aan laga warqabin Qaramada Midoobay waxayna UNWTO ka dhigeysaa qosol qosol leh oo ku saabsan siyaasada adduunka.
Waxaa muhiim ah in la raadsado sharaxaad ku saabsan waxa ka socda geedi socodka doorashada iyo sidoo kale halista la gali karo in Xubnaha Golaha Fulinta la geeyo Georgia kulan afar saacadood ah oo keliya marka wada hadalada noocaas ah horeyba u xaddidanaayeen oo loo sii dejiyey.
Fikraddu waa aamusnaan cad wixii xubin Golaha ah oo dhaliil ah.
Kaliya 20% dhammaan waddamada UNWTO ayaa xubno ka ah golaha waxayna sameeyaan tallada inta badan go'aamada ugu sarreeya, oo ay kujirto doorashada Xoghayaha Guud ee soo socda.
Run, Golaha Guud wuxuu u baahan doonaa inuu oggolaado go'aanka noocan oo kale ah, laakiin weligiis ma jirin mucaarad ku taageeray noocan oo kale horay. Badanaa, ansixinta noocan oo kale ah waxay qaadanayaan banaan.
Sida had iyo jeer eTurboNews waxaa lagu gaarsiiyay emayl, Linkedin, Facebook, twitter iyo Telefoon UNWTO si loo caddeeyo.
Codsiyada wareysiyada waligood lama helin tan iyo markii Xoghayaha Guud uu xafiiska la wareegay.
Gaar ahaan, Anita Mendiratta, oo ah lataliyaha gaarka ah ee Xoghayaha Guud, iyo Marcelo Risi, Madaxa Xiriirka Warbaahinta ee Xogheyaha Guud ayaa lumiyay xirfadahoodii ay kula xiriiri lahaayeen. eTurboNews tan iyo intii SGani ay xilka la wareegtay 1-dii Janaayo, 2018. Intii lagu guda jiray hoggaanka Dr. Taleb Rifai, eTurboNews wuxuu xiriir la lahaa UNWTO iyo Marcelo iyo Anita labadaba si joogto ah, oo ay ku jiraan. Waxaa la xaqiijiyay in eTurboNews ilo wareedyo badan SG uma ogolaanayo qof inuu la hadlo eTurboNews oo wuxuu kani shuruud uga dhigay xitaa shirarka jaraa'id ee uu ka qayb galo.
Sidaas darteed, ma jirin wax khilaaf ah oo ay UNWTO ka qabatay waxyaabaha ku xusan qodobkan iyo maqaallo hore oo mowduucan ku saabsan.
Qunsuliyadda Faransiiska ee New York oo hadda soo bandhigaysa Khamriyada Val de...
Bandhig faneedka casriga ah ee caalamiga ah ee Kyoto